अन्तर्वार्ता | eBachan Nepali Christian Magazine | Page 5
दश बाह्र मिनेट हिमपहिरोमा पुरिएँ
जोमेश वड हरेक नौलो दिन मेरो लागि साँच्चै ताजा र नौलो हुन्छ । हरेक विहानीको उज्यालो किरणलाई म हौसलाको साथ स्वागत गर्छु । एउटा घटनाले मलाई मृत्युको यति नजिक पुर् यायो सायद दुनियाँमा थोरै मानिसले त्यस्तो अनुभव गरेका होलान् । म एक क्रीस्चियन हुँ । येशू प्रभुले मलाई व्यक्तिगत प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले बाइबलमा थाहा पाएको छु । तर मलाई ...	Read More »
म एक सुसम्पन्न घरानाको संस्कृत आचार्य पदले विभूषित कृष्ण भण्डारी”काइलो”
ब्राह्मण पुत्र , हिन्दु धर्मावलम्बीमा बैष्णबी पनि थिएँ | मेरा बुबा सनातनबाट उठेर कबिर-पन्थी भएकै कारण म पनि कबिर-पन्थि नै थिएँ एक समयमा | मेरो गलामा तुलसीको माला सधैं रहेकै हुन्थ्यो तर एकदिनको घटना म पढ्ने सरकारी स्कुलको बिद्यार्थी हस्टेलको दिउसोको खानामा माछा को टुक्रा परेछ जसलाई मैले अन्जानमा खाएँ र मलाई असुद्धताको बोध भएर मनमा खिन्नता भयो, पछि स्कुल छुट्टी ...	Read More »
मिडियाबाट परमेश्वरको ठूल–ठूला काम गर्न सकिन्छ ।
पाइलाहरु विस्तारै असनतिर…
सँगैको छिमेकीको छोरी धेरै समयदेखि बिरामी भएर सुती रहेकी थिइन् । यसरी सुतीरहेका देख्दा एक दिन मैले, बिरमी छोरीको आमा विधा थापालाई मैले भने तपाईको छोरी निको भएको छैन । हिँड म धामी कहाँ लिएर जान्छु । कमला : त्यसोभए निको भएको छैन भने हिड्नुस मैले धामी देखेको छु । तपाईको छोरीलाई त्यही लिएर जाउ । तपाईको छोरीलाई धामीकहाँ देखाउ ...	Read More »
बैसाखीको साहारमा पा.प्रेम लामा…
सानैदेखि मलाई खेलकुदमा निकै रुचि थियो । गाँउमा हुँदा नै किक बक्सिङ्ग सिके । तर सानैदखि पढाईमा रुचि नै थिएन । मलाई बुबा आमाले पठाउन पठाए पनि मलाई ह्ृदय देखि नै पढ्न मन थिएन । कक्षा ६ बाछट नै स्कुल छाडिदिए । अनि किक बक्सिङ्ग खेलतिर विशेष ध्यान दिए । खेल्दै जाँदा शारीरिक रुपमा पनि म तन्दुरुस्त थिए । लामाको ...	Read More »
उहाँले मलाई प्रेरणा दिनुभयो।
“उहाँ प्रभुमा सुत्नुभइसकेको छ । “ NC. तपाईंको बाल्यकाल कसरी बित्यो ? मेरो जन्म केरलामा भएको हो। मेरो परिवारमा बुबा, आमा हजुरबुबा सबै ख्रीष्टियन हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो पुस्तौं देखि एउटा ख्रीष्टियन इतिहास छ। तर पनि हाम्रो ख्रीष्टियन पृष्टभूमि हेर्‍यो भने हामी सुरुको अर्थोडोक्स चर्च पृष्ठभूमिका हौं। मेरो हजुरबुबा धेरै बर्षअगाडि प्रभुको वचन सुनी ग्रहण गरेर अर्थोडोक्स चर्चमा जानु भएको थियो। ...	Read More »
उहाँहरुले प्रार्थना गर्ने वित्तिकै उनको जीवनको खोक्रोपन हराएर गयो ।
जीवन गवाही नाम : नरेश महर्जन ठेगाना : घर, झोसे, न्युरोड, हाल: नयाँ बस्ती, बाफल उमेर: ४९ परिवारमा: सबै परिवार, २ छोरा, प्रज्जल महर्जन र निरजल महर्जन, श्रीमती रायल महर्जन पेशा : न्युरोडमा रोडा पसल जिवनमा अनेक मोडहरु आउछन् कति रमाइला हुन्छ त कति यस्तै प्रकारका हुन्छन् । जसरी भएपनि यी जीवनका मोडहरु त पार्न हुनु नै छ । मान्छे ...	Read More »
प्रभुको दर्शन पाएपछि नेपाल फर्के ।
प्रेयर टावर कसरी शुरू भयो ? सन् १९९७ मा पढ्न १ वर्षको लागि यु.के. गएको थिए । १७ जनवरी १९९७, रातीको १० बजे प्रभुले २४ सै घण्टा प्रार्थना हुनुपर्दछ भनेर प्रभुले देखाउनु भयो । जसै अस्पताल, पुलिस, आर्मी, कलकारखाना, एटिएम, ट्रेन, कलेज सबै २४ सै घण्टा सञ्चालन हुन्छ साथै यी विना जीवन जीउन गाह्रो छ त्यसरी नै हामी पनि आत्मिक ...	Read More »
हजुरआमालाई विष मागेको थिएँ
राजु घिमिरे रगत जाँचको निम्ती शरीरमा सुइ घुसाउने ठाउँ नहुनु भनेको कस्तो होल तपाई आँफै कल्पना गर्नुहोस्। मेरो हालत एकपल्ट त्यहाँसम्मा पुगेको थियो। मेरो रगत जाँचको निम्ती शरीरमा सुइ घुसाउने ठाउँ नहुनु भनेको कस्तो होल तपाई आँफै कल्पना गर्नुहोस्। मेरो हालत एकपल्ट त्यहाँसम्मा पुगेको थियो। मेरो छेउमा बसी यात्रा गर्ने एक द्रिष्टिविहीन व्यक्तिले बस् भित्र कुहेको मुसो छ कि ...	Read More »
मात्र मिसिनेरीको रूपमा आएको थिए ।
नेपालमा तपाईंको प्रवेश कहिले भयो ? सन् १९८५ नेपालमा आएको हुँ । पहिलो चोटी नेपालमा आउँदा कस्तो महशुस भयो ? मलाई अचम्म लाग्यो किनभने म कहिले पनि नेपालमा आएकी थिइन । म र मेरो साथी इन्डियामा बस्थ्यौं । त्यहाँ म एकदम निराश भए कारण यस्तो किसिमको ठाउँमा म वस्न सक्दिन । मेलै एउटा एग्रीमेन्ट गरे सात वर्षको विचमा साढे ३ ...	Read More »